Wararka - “Ku Abuur Koox Midnimo iyo Iskaashi” –Hawlaha Waxqabadka Dhismaha ee Waaxda Suuqgeynta ee Caafimaadka Kangyuan waxay ku yimaadeen guul guul
Markay gu ’timid, wax waliba way noolaadeen. Bishii Maarso 26, 2021, Waaxda Suuqgeynta ee Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co., Ltd. waxay ku qabatay waxqabad dhisme kooxeed Lake Nanbei. Qof kastaa wuxuu ugu riyaaqay hawsha qosol, farxad, xamaasad.
9 o 'saacad subaxnimo, Waaxda Suuqgeynta ee Kangyuan ayaa timid Waqtiga Lake Lake Nanbei. Kadib hawl fudud oo jabinta barafka ah, waxaan dhameynay kooxayntii waxaanan qaabeynay calanka kooxda, qaabeynta iyo halheyska. Kadib dhismihii kooxda ayaa bilaabmay. Hogaamiyaha waxqabadka wuxuu noo horseeday inaan fulino ciyaaro badan oo xiiso leh. Waan wada shaqeynay oo aan wada shaqeynay. Jawiga ayaa marna kacsanaa marna nasanayay. Kaliya ma aysan yareyn masaafada udhaxeysa midba midka kale, laakiin sidoo kale waxay xoojisay isku xirnaanshaha kooxda, taasoo muujineysa ruuxa midnimada, shaqada adag iyo horumarka wanaagsan ee shaqaalaha Kangyuan '.
Duhurkii, waxaan u nimid B&B buurta waxaanan bilawnay dubbiinka hawada furan.Waan wada shaqeynaa. Qaar khudaarta maydhay oo hilib gooyeen. Qaarkood waxay diyaariyeen hilib dubista. Dhammaanteen waxaan kawada dharagsaneyn xamaasad waxaana labadeenaba dareemay mashquul iyo farxad sidaa darteed B&B-da yar waxaa ka buuxay diirimaad iyo jacayl.
Qadada kadib, qof walba wuxuu wajahay Baiyun Pavilion iyo Shanhai Lake waxayna ku riyaaqeen neecawda guga diirran iyo heesaha dabacsan ee shimbiraha. Qaab xaflad shaah ah, waxaan isku darsanay dhiirrigelinta waxqabadka kooxdan kooxeed iyo shaqada maalinlaha ah ee Kangyuan si loo mideeyo caqligeena isla markaana si wada jir ah loo baaro qaab shaqo oo hufan oo iswaafajin ah
Hawlahan dhismaha kooxeed, waxaan ku wadaagnay khibrad cajiiba dhididka, qosolka, wada hadalka iyo dareenka maskaxda. Mustaqbalka, waxaan, u midownay sidii mid, gacmo gacmeed, is fahmay, isla ujeeddadiisuna ahayd, waxaan si adag uga shaqeyn doonaa kor u qaadida dhismaha warshadaha caafimaadka iyo caafimaadka.